ग्वार्डिओला तथा इनरिकेको सफलताको बाटोमा जालान त भलभर्दे ? « Sansar News
ग्वार्डिओला तथा इनरिकेको सफलताको बाटोमा जालान त भलभर्दे ?
१६ जेष्ठ २०७४, मंगलवार ०८:३२
१५ जेठ काठमाडौँ । स्पेनिश क्लब बार्सिलोनाले सोमबार एरनेस्टो भलभर्देलाई नया प्रशिक्षकको रुपमा नियुक्त गरे सँगै विश्व फुटबल जगतमा उनको चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । सफल प्रशिक्षक लुइस इनरिकेले क्लब छाडे सगैँ बार्सिलोना आएका भलभर्देलाई विगतमा वार्सिलोनाले प्राप्त गरेका सफलताहरुलाई निरन्तरता दिर्द क्लबलाई नया उचाईमा पुर्याउने नया चुनौती थपिएको छ ।
विगतका दुई दशकमा युरोपेली फुटबल क्लबहरुमा सबैभन्दा सफल क्लब मानिन्छ बार्सिलोना विगत दुई दशक देखि विश्व फुटबल जगतमा बार्सिलोना सबैभन्दा सफल क्लबको रुपमा उदाएको छ । अझ भन्ने हो भने क्याटालान क्लबमा पेप ग्वार्डिओला ले त एउटा तरंग नै सिर्जना गरिदिएका थिए । सन् २००८ देखि २०१२ सम्म बार्सिलोनाको प्रशिक्षक रहेका ग्वार्डिओलाले क्लबलाई १४ ओटा उपाधि जिताएका थिए । ग्वार्डिओला बहिर्गमनको दुई सिजन पश्चात आएका इनरिकेले बार्सिलोमा ३ सिजन बिताउदै ९ वटा उपाधि जिताएर क्लब छाडेका हुन् ।
भलभर्दे पनि यसअघि ५ वटा युरोपेली क्लबहरुमा मुख्य प्रशिक्षकको भुमिका निभाइसकेका छन् । क्याटालान क्लबलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने जिम्मेवारी भलभर्देको काधमा आइसकेको छ । नया खेलाडीहरुको अनुबन्धन देखि वर्तमान खेलाडीहरुको चुस्त व्यवस्थापन गर्दै बार्सिलोनालाई नँया उचाइमा लैजाने चुनौती भलभर्देको काँधमा आइसकेको छ र कति सफल हुन्छन भन्ने कुराको निर्धारण आगामी सिजनले अवश्य नै निर्धारण गर्नेछ ।